यसरी खोजियो नेपालको पहिलो फेसबुक प्रयोगकर्ता - MeroReport
Posted by Indra Dhoj Kshetri on October 10, 2012 at 12:00pm
मैले आफ्नो टाइमलाइन हेरेर सबैभन्दा पहिला कोसँग म साथी बनेछु भनेर हेरेँ । अनि मभन्दा पुराना साथिहरुको पनि टाइमलाइन हेरेँ । तर धेरै अघि जान सकिएन । सबै साथीहरु मभन्दा २,४ महिना अगाडि मात्र फेसबुक चलाउन थालेका थिए र उनीहरुले पनि विदेशीहरुलाई साथी बनाएका थिए।
त्यसपछि मैले यो कुरा अफिसमा सहकर्मीहरुसित भनेँ । उनिहरुमध्ये अलिक टेक फ्रिक श्रुतीले यसमा ठुलो सहयोग गर्नुभयो । उहाँ आफैँ पनि मभन्दा डेढ महिना अघिदेखी फेसबुक चलाइरहनुभएको रहेछ । उहाँको टाइमलाइनमा मित्रताको इतिहास हेर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो कि स्वन्तिना शाक्यले अक्टोबर २६, २००६ मा फेसबुक अकाउन्ट खोल्नुभएको रहेछ । उहाँभन्दा अघि अकाउन्ट खोलेका नेपालीहरु पनि थिए तर तिनीहरुले नेपाल बाहिरबाटै फेसबुक जोइन गरेको थाहा भयो । अनि हामीले स्वान्तिनासँग यो कुराको पुष्टि गर्न खोज्यौँ । उहाँले भन्नुभयो कि त्यतिखेर काठमाडौँमै साइबरमा गएर अकाउन्ट खोल्नुभएको थियो र अहिलेसम्म निरन्तर चलाउँदै आउनुभएको छ ।
त्यसपछि मैले फेसबुकको टाइमलाइन हेरेँ । सेप्टेम्बर २६, २००६ मा बल्ल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको रहेछ । त्यसको १ महिनामै स्वान्तिनाले नेपालमा अकाउन्ट खोल्नुभएको रहेछ ।
त्यसपछि पनि हामीले फेसबुक र ट्वीटरमार्फत धेरै साथीहरुलाई सोध्यौँ । तर उहाँभन्दा अगाडि खोलेको दाबी नआएपछि उहाँलाई नै नेपालको पहिलो फेसबुक प्रयोगकर्ता मान्ने निर्णय गर्यौँ ।
यो ऐतिहासिक तथ्य भएकोले कसैले उहाँभन्दा अगाडिको दाबी प्रमाणित गर्छ भने उही नै पहिलो प्रयोगकर्ता मानिनेछ । अहिले स्वन्तिनाको अन्तर्वार्ता पढौँ मेरोरिपोर्टमा ।
यो खोजको क्रममा ट्वीटर र फेसबुकमा भएको बहस नेपालको पहिलो फेसबुक प्रयोगकर्ताको खोजी पनि पढ्न सकिन्छ ।
मेरोरिपोर्टमा यो लेख पोष्ट भएपछि बल्ल धेरै मानिसहरुलाई कौतुहलता बढ्यो र थुप्रै दाबीहरु आए । सन् २००५ मा नै फेसबुक शुरु गर्ने नेपालीहरु पनि भेटिए तर तीमध्ये धेरै वा सबै अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा फेसबुक शुरु गरेका थिए । फेसबुक सेप्टेम्बर २६, २००६ मा मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । तसर्थ त्यसभन्दा अगाडि नै फेसबुक शुरु गर्नेहरुलाई सर्वसाधारण प्रयोगकर्ता मान्न सकिएन ।
मानिसहरुमा कौतुहलता, दाबी र खोजी बढ्दै जाँदा स्वन्तिनाभन्दा अगाडि नेपालबाटै फेसबुक प्रयोग गर्ने तीन जनाको दाबीलाई हामीले पुष्टि गर्न सकेका छौँ ।
कृपा शाक्य र शशांक शर्माले अक्टोबर १८, २००६ मा र रेजर महर्जनले अक्टोबर १३, २००६ मा शुरु गर्नु भएको रहेछ । तसर्थ अहिलेसम्म नेपालमै बसेर फेसबुक प्रयोग शुरु गर्नेमा रेजर महर्जन नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । यद्यपी हामीले माथि नै भने झैँ यदि त्यसभन्दा अघि नै नेपालबाटै फेसबुक प्रयोग गर्ने अर्को व्यक्तिबारे जानकारी आएमा हाम्रो यो दाबी परिवर्तन हुनेछ ।
Comment by Bijaya Timalsina on October 12, 2012 at 10:37am
Comment by Indra Dhoj Kshetri on October 11, 2012 at 9:58am
Thank you all. As I said, this research was based on snowball sampling and we can't rule out it to be 100% correct. Regarding Bigyan's claim, I have checked his timeline and seems he joined from America, not from Nepal. This research includes only those who started using facebook from Nepal.
Comment by Bigyan Ghimire on October 11, 2012 at 9:35am
i know one of my friend who joined facebook on jan 12 2006 so as based on this research he sud be the oldie https://www.facebook.com/sarobar he is belong to cybersansar as well
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on October 10, 2012 at 7:45pm
Comment by Tek Raj Bhandari on October 10, 2012 at 6:57pm
Comment by Binaya Shekhar on October 10, 2012 at 5:18pm
Very impressive work. Great done.
Comment by Indra Dhoj Kshetri on October 10, 2012 at 2:21pm
पागलबस्ती दाई अहिले बल्ल लिङ्क Embed भएको छः http://meroreport.net/bow-swantina-shakya
Comment by Pagal Basti on October 10, 2012 at 1:17pm
khai ta antarbarta??